Asambodo Ofesi na Mba Ọ bụla
Mee Azụmaahịa na Steeti Ọzọ
A na-ahazi ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na steeti. Dika odi, enwere uzo uzo ato; ụlọ, ndị mba ọzọ na ndị ọbịa. Corlọ ọrụ ụlọ bụ azụmaahịa na-ere ahịa na steeti etinye. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ a chọrọ ijigide ụlọ ọrụ na steeti ọzọ, ọ ga-ebu ụzọ debanye aha na steeti a, a ga-ewerekwa ya dị ka ụlọ ọrụ “ndị mba ọzọ”. A ga-ewere ụlọ ọrụ ahaziri na mba ọzọ “ọbịa”. Companieslọ ọrụ Incorporated ga-enyere aka ịkwadebe akwụkwọ dị mkpa maka gị iji ruo eru maka ọnọdụ ndị mba ọzọ ka LLC ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị wee rụọ ọrụ na steeti ọzọ.
Iji mee ka ndị mba ọzọ mezuo azụmahịa ị jikọtara na steeti ọzọ, a ga-enyerịrị asambodo ezi ọnọdụ na steeti ala gị ma jiri akwụkwọ maka iru eru ndị ọzọ gaa na steeti ọzọ. Ọrụ a chọrọ akwụkwọ na itinye aka na steeti niile metụtara. Lọ ọrụ jikọtara ọnụ na-eme ka usoro a dịrị gị mfe, gwa anyị naanị ebe esonyere gị, nkọwa ole na ole gbasara ụlọ ọrụ gị yana ihe na-ekwu na ịchọrọ ka iru eru gị.